. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .: January 2010
ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဘူးတော့ သိသလိုပဲ .. သိသလိုပဲ ပဲရှိသေးတော့ သေချာတယ် မပြောနိုင်သေးပြန်ဘူး .. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ် မချစ်သလိုပဲ .. စာတွေဖတ်တယ် .. ဗေဒင်တွေ ဖတ်တယ် .. အဲဒီမှာတွေ့တယ် .. ကိုယ်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို ပြန်ချစ်လာစေချင်ရင် မျက်နှာကို မြင်အောင် ကြည့်ပြီး မေတ္တာပို့ဖို့ .. လုပ်တာပဲ .. တကယ်လည်း စွမ်းတယ် .. စွမ်းလို့ နောက်ပိုင်း ဒုက္ခဖြစ်ပြန်ရော .. ဘယ်အရာမှ အလွန်အကျွံမဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ .. မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာလည်း မချင့်ချိန်တတ်ရင် အထားမတတ်ရင် တဖက်က နစ်နာစရာ ဖြစ်တတ်သေးတယ် .. (ရှုပ်တယ်နော် .. :D)
မေတ္တာတရားထားတာ မေတ္တာထားတတ်တာ လူချစ်လူခင်ပေါတယ် .. မေတ္တာထားနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ .. ဒါပေမယ့် ဖြူစင်သင့်တယ် သန့်ရှင်းနေသင့်တယ် .. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို လိုလားတဲ့ မေတ္တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး .. ငါဒါလေး ပေးလိုက်ရင် သူ့ဆီက ဒါတော့ ပြန်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပေါ့ .. ဒါက စီးပွားဆန်သွားပြီ ထင်တယ် .. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ရူးချာချာနဲ့ အကုန်လျှောက်လုပ်ဖူးတယ် .. ရီလည်းရီရတယ် .. ခုကျတော့ ရီစရာပေါ့နော် .. အချိန်က လူကို ရင့်ကျက်စေတယ် .. ခုတော့ ပေါချာချာ အလုပ်တွေ မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားနေတယ် .. ဒါတောင် တချက်တချက် .......
ဘာတခုမှ ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ် မရှိတော့ရင် ပိုင်ဆိုင်ချင်စရာ မကောင်းတော့ရင် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းနေမလား .. မက်မောစရာတွေ ရှိနေလို့ပဲ လူတွေ ပူလောင်နေကြတာလား .. အပူဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရှာတာထင်ပါရဲ့ .. တခါတခါ စိတ်က လူနောက်ကို လိုက် .. တခါတခါ လူက စိတ်နောက်ကို လိုက် .. ရေးသားသူ
ခု လက်ရှိမှာတော့ ဆံထုံးလည်း မပါ(ဂတုံးလည်း မဟုတ်ပါ :P) .. ယူနီဖောင်းလည်း မ၀တ်ရ .. ဒေါက်ဖိနပ်လည်း မစီးနိုင်တဲ့ ဘ၀ပါ .. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတော့ ဆိုက်ထဲဆင်းတဲ့အခါ အင်္ကျီအဖြူတောင် မဲတယ်လေ .. ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ချင်တာတော့ အင်ဂျင်နီယာပါ .. တကယ်တမ်းရတဲ့ ဘွဲ့ကတော့ အီကို .. တနင်္ဂနွေနာမ်တော့ တနင်္ဂနွေနာမ်ပဲ .. :D
ကံတရားကတော့ ခုချိန်ထိ မဆိုးသေးဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ် .. ဖြစ်ချင်တာလေးတွေ သူ့လမ်းကြောင်းလေးနဲ့ သူ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် .. နောက် ၅ နှစ် .. ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေကတော့ အချိန်နဲ့ အမျှ ဖြစ်နေတာပါပဲ .. ပြောင်းလဲ နေတာပါပဲ .. :D နောက် ၅ နှစ်မှာ ဖြစ်နေချင်တာလေးတွေကတော့ ..
- ပီအာတော့ ဖြစ်နေလောက်ပြီ ထင်ရတာပါပဲ ..း)) ပီအာဖြစ်ပြီးရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်နဲ့ စလုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းလေး တခုလောက်တော့ လုပ်ချင်တယ် .. သိပ်တော့ မလွယ်ပါဘူး .. ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ .. - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခြံလေးတခြံနဲ့ နှစ်ရှည်ပင်တွေ စိုက်ချင်တယ် .. မေမြို့လို အေးတဲ့နေရာမျိုးမှာ ပန်းပင်တွေ စိုက်ချင်တယ် ..
- မမ၀ါလိုပဲ ကော်ဖီဆိုင် ကောင်းကောင်း သန့်သန့်လေး တခု ဖွင့်ချင်တယ် .. - ကလေးတွေ ထိန်းတဲ့ ကျောင်းမျိုးလည်း အဆင့်မြင့်မြင့်လေး ဖွင့်နိုင်ရင်ကောင်းမယ် .. - ဘိုးဘွားရိပ်သာလိုမျိုး သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေကို ပြုစုပေးနိုင်မယ့် နေရာတခုလောက်လည်း လုပ်ပေးနိုင်ချင်တယ် .. (ဒါကတော့ စီးပွားရေး မဟုတ်ပဲ လုပ်ချင်တာမျိုးပါ .. ကြိုးစားရင်တောင် နှစ်တွေ အများကြီး စောင့်ရလောက်တယ် .. မလွယ်ဘူး ..)
ကံတရားကို ကြိုမမြင်နိုင်လို့ ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို လုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်သွားရုံပါပဲ .. နောင်တ ကင်းကင်းနဲ့ ရှင်သန်သွားချင်တယ် .. အများကြီး မတန်တဆ မမျှော်လင့်သလို ဖြစ်သင့်တာလေးတော့ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားရ မှာပါပဲ .. လူတိုင်းက ကံကောင်းခြင်းကိုပဲ လိုလားတတ်ကြပါတယ် .. ကံကောင်းအောင် ကိုယ်တိုင် ကောင်းနေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ် .. မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တသီတတန်းနဲ့ ရှေ့လာမယ့် ခရီးကို လျှောက်ပါဦးမယ် .. ခွဲခွာခြင်း မှတ်တိုင်နဲ့ ဆုံတွေ့ခြင်း မှတ်တိုင်ပေါင်း များစွာကိုလည်း ဖြတ်သန်းပါဦးမယ် .. ခရီးဆုံးတဲ့အထိ လက်တွဲ လိုက်ပါနိုင်မယ့် အဖော်မွန်ကောင်းတဦးနဲ့တော့ ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ် .. (ခု လောလောဆယ်မှာတော့ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ၅၀% ပါပဲ) ကိုယ်တိုင်လည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ် .. မမ၀ါအတွက် ညီမစိတ်ကူးလေးတွေကို ချရေးလိုက်ပါတယ် .. မမ၀ါလို ပျော်ရွှင် အောင်မြင်တဲ့ မိသားစုလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ ..း)) မမ၀ါလည်း ဘ၀ တလျှောက်လုံး ဒီမိသားစုလေးနဲ့ အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေ .. ပျော်ရွှင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ် ..း))
1/10/2010 11:06:00 PM
1/09/2010 02:18:00 AM
နားမလည်တဲ့ ပုစ္ဆာဆန်ဆန် စကားတခွန်းကို
အရာရာဟာ တစတစ ဝေးကွာခြင်းကို ဦးတည်
1/02/2010 08:52:00 PM